Acer Aspire3A314 Red (Pentium) ~ ICT.com.mm
HomeAcer Aspire3A314 Red (Pentium)
Acer Aspire3A314 Red (Pentium)
Intel® Pentium® Silver N5000 Processor 324 339 ( 4MB Cache, 1.10 GHz up to 2.70 GHz) Intel ® UHD Graphics4GB DDR4 Memory,500GB HDD 14” HD Acer CineCrystalTM LCD USB 3.0,... [Learn more]
Brand: AcerSKU: 58261N/ASee more: Acer, Computer Systems, Laptops / Notebooks, New Arrivals, Products, Shwe Lamin NagarFilter by: 14", 4GB RAM, 500GB HDD, EDIT-ONE, Intel Integrated Graphics, Intel Pentium, Laptops (PC), No-OS, outofstock, Red, SLMNG, USD
Intel® Pentium® Silver N5000 Processor 324 339
( 4MB Cache, 1.10 GHz up to 2.70 GHz)
4 GB DDR4 Memory,500GB HDD
14” HD Acer CineCrystalTM LCD
USB 3.0, Card Reader, HDMI, GBLAN
လုပ်ငန်းသုံးဆော့ဖ်ဝဲအမြင့်တွေ သုံးစရာမလိုဘဲ Microsoft Office Suite လို ပုံမှန်ရုံးသုံးဆော့ဖ်ဝဲတွေကိုပဲ သုံးမယ်၊ အင်တာနက်သုံးမယ်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်/သီချင်းနားထောင်မယ် စတဲ့အသုံးပြုမှုတွေလောက်အတွက်ပဲ ဆိုရင် ဒီ Acer Aspire3A314 တစ်ကိုယ်ရည်သုံး/ရုံးသုံး Laptop လေးကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ System ပိုင်းမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Intel® Pentium® Silver N5000 Processor က ပုံမှန်ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုမှုတွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ CPU တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို တပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့နဲ့ အလုပ်တွေမြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြီးမြောက်ဖို့အတွက် RAM 4GB (DDR4) ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဒေတာသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ကိုတော့ HDD 500GB ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ Intel ® UHD Graphics ကတ်က Laptop ရဲ့ဂရပ်ဖစ်ပိုင်း လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါ။ မျက်နှာပြင် အရွယ်အစားကို 14” နဲ့ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ မျက်နှာပြင် Resolution က HD ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည်လင်တဲ့ရုပ်ထွက်နဲ့ မြင်တွေ့ရမှာပါ။ အခြား Devices တွေနဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ USB 3.0, Card Reader, HDMI, GBLAN တို့ကို ထည့်သွင်းပေးထားသလို DVD Drive လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဘတ္ထရီအတွက်ကိုတော့ 2Cell ဘတ္ထရီအမျိုးအစားကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အရောင်ကွဲအနေနဲ့ အနီရောင်၊ အနက်ရောင်တို့ဖြင့်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ အာမခံ သက်တမ်း တစ်နှစ် ပါဝင်ပါတယ်။
The delicate horizontal hair-line brush pattern deliversabeautifully inviting tactile finish. A stunningly slim body and impressive tactile finish accentuate real-world design features. The Precision Touchpad is more responsive than traditional touchpads helping you work more effectively. With 500GB of hard drive space, you can easily store and share your important projects and data.